UISAYA 37 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UISAYA 37UISAYA 37
Ukumkani ucetyiswa nguIsaya
(2 Kum 19:1-7)
371Ke kaloku wathi akuziva ezi ndaba ukumkani uHezekiya, suka wakhathazeka, wazikrazula izambatho zakhe, wanxiba ezirhwexayo zokuzila, waya endlwini *kaNdikhoyo. 2Wathuma uEliyakim umaqhuzu wakomkhulu, noShebhena unobhala wenkundla, kunye nababingeleli abaphambili, bonke benxibe ezirhwexayo zokuzila, wathi mabaye *kumshumayeli uIsaya, unyana ka-Amozi. 3Baya, bafika bathi: “UHezekiya uthi: ‘Lo ngumhla wenkxwaleko, impoxo, nehlazo. Sifana nomfazi ofikelwe lixesha lakhe lokuzala, kodwa engenawo amandla okujongana naloo meko. 4Makube uNdikhoyo uThixo wakho uwevile onke amazwi athethwe yingqwayi-ngqwayi leyo ibithunywe yinkosi yayo ukumkani waseAsiriya ukuze ize kuphoxisa ngoThixo ophilayo. Ngamana yakhalinyelwa ngenxa yamazwi aweve ngokwakhe uNdikhoyo uThixo wakho. Ngoko ke nceda uthandazele amasalela asindileyo.’ ”
5Athe ke akufika kuIsaya loo maphakathi kakumkani uHezekiya, 6uIsaya wathi kuwo: “Yixeleleni inkosi yenu ukuba uNdikhoyo uthi: ‘Musa ukuxhalaba yiloo nto uyivileyo – loo mazwi athethwe ngamaphakathi kakumkani waseAsiriya endithuka. 7Uyabona ke, mna ndiza kumfaka umoya wokuba athi akuva umingi-mingi lodaba oluthile, asuke abuyele kwelakowabo. Khona apho ke ndiya kwenza ukuba abulawe ngekrele.’ ”
Ama-Asiriya athumela isoyikiso
(2 Kum 19:8-19)
8Ingqwayi-ngqwayi yomkhosi yathi yakuva ukuba ukumkani waseAsiriya umkile eLakishe, suka yarhoxa, yabuya umva, yaza yafika ukumkani esilwa neLibhena.
9Ke uSenakeribhe wafumana udaba oluthi ukumkani uTiraka umKushe nanko ehlasela iAsiriya. Ngoko ke waphinda wathumela kuHezekiya esithi: 10“Yithi kukumkani uHezekiya wakwaJuda: ‘Musa ukukhohliswa ngulo Thixo wakho umthembileyo. Uyakuxokisa xa esithi: “IJerusalem ayiyi kuthinjwa ngukumkani waseAsiriya.” 11Kaloku sowuzivile izigigaba zokumkani waseAsiriya kwezinye izizwe; uyazi ukuba wazibhukuqa wazitshabalalisa tu. Ke wena uthi uya kusinda njani? 12Babephi *oothixo bezizwe ezatshatyalaliswa ngoobawo-mkhulu? Abazihlangulanga ngani ke oothixo baseGozan, eHaran, eRezefe, nabo babantu baseIdeni ababeseTelasare? 13Uphi ngoku ukumkani waseHamati, owaseArpadi; ukumkani wesixeko saseSefarvayim? Yena owaseHena nowaseIva uphi?’ ”
14Ezo zigidimi zamnika loo leta uHezekiya, waza ke yena wayifunda wayithatha waya nayo endlwini *kaNdikhoyo, wafika wayandlala phambi koNdikhoyo. 15Wathandaza kuNdikhoyo, wathi: 16“Ndikhoyo, Somandla-onke, Thixo kaSirayeli, wena osesihlalweni phakathi *kwezithunywa ezimaphiko,Mfud 25:22 nguwe kuphela onguThixo olawula zonke izikumkani zehlabathi. Wena walidala izulu kwanehlabathi. 17Kaloku ke, Ndikhoyo, khawubek' iindlebe uphulaphule. Vula amehlo akho ujonge, Ndikhoyo. Khawuweve onke la mazwi awathumeleyo uSenakeribhe, ethuka uThixo ophilayo. 18Ngenene, Ndikhoyo, ookumkani baseAsiriya bazibhuqa bazitshabalalisa ezi zizwe zonke kunye nemihlaba yazo. 19Oothixo bazo wabafaka emlilweni, wabatshabalalisa; kuba kakade babengethixo, koko yayiyimifanekiso eqingqwe zizandla zabantu ngomthi nangelitye. 20Ngoko ke ngoku, Ndikhoyo Thixo wethu, khawusihlangule kulo mfo, khon' ukuze zonke izikumkani zehlabathi ziqonde ukuba nguwe wedwa uNdikhoyo.”
UIsaya uxela ukuwa kukaSenakeribhe
(2 Kum 19:20-37)
21Ke uIsaya unyana ka-Amozi wathumela umyalezo kuHezekiya, esithi: “*UNdikhoyo uThixo kaSirayeli uthi: ‘Ndiwuvile umthandazo wakho mayela nokumkani waseAsiriya uSenakeribhe.’
22“Mayela naye ke uNdikhoyo uthi:
‘Okokwakho, wena Senakeribhe,
isixeko iZiyon siyakugcolodela,
isixeko iZiyon sihlekisa ngawe.
Ewe, iJerusalem ihlunguzel' intloko
xa ikubona wena uswantsula.
23Ngubani lo umngcikiva ngezinyeliso ezinje?
Uba uthetha nabani, ukhwaza nje?
Ngubani lo umjonge ngekratshi?
Lowo ke nguYedwa kaSirayeli!
24Wena uthumele izigidimi,
uNdikhoyo wamfumba ngezithuko;
kaloku ugcolode wathi: “Mna ndinenyambalala yeenqwelo;
ngazo ndiqabel' iintab' eziphakamileyo,
loo malenga-lenga aseLebhanon.
Ndiyigawule imisedare yayo emide
naloo mipayini yayo ingayiwayo.
De ndafikelela nasekudeni,
nditsho esitsikolweni sehlathi.
25Ndimbe amaqula kumazwe eentlanga,
ndaza ke ndasela amanzi khona.
Ndingqishe ngonyawo kuphela,
ngazo zona ezi nyawo zam,
zatsho zoma zonk' iintlambo eJiputa.”
26“ ‘Ngaba awuzange uve na,
ukuba le nto yamiselwa ndim,
ukuba sekuntsuku ndayicwangcisayo
le nto yenzekayo namhlanje,
ukuba wena udilize izixeko ezinqatyisiweyo,
uzivuthulule zitsho zibe ngamabhodlo?
27Abemi bazo baphelelwe ngamandla;
bathe nkamalala, bayanyongoba.
Nqwa nomfino emasimini phaya
ngathi zizithombo ezithukuzayo;
ngathi yingc' entshula phezu kwendlu,
esuk' itshe ingakhulanga nokukhula.
28“ ‘Kambe ke ndikwazi kakuhle;
ndikwazi ukusuka nokuhlala
namagwevu okundivukela kwakho.
29Kaloku wena uzimisele ukulwa nam.
Ndivile nangokundinyelisa kwakho.
Ndiza kukuqhobosha impumlo,
ndikufake umkhala emlonyeni,
ndikubuyisele aph' ubuvela khona.’
30“Nanku ke umqondiso wakho, Hezekiya:
“ ‘Kulo nyaka uza kutya ummilela,
kowesibini utye ummilela wommilela,
kowesithathu ke uhlwayele uvune,
utyale izidiliya, utye iziqhamo zazo.
31Ophinda ke amasalela endlu kaJuda amile;
ewe, aya kuzinza, aqhelezele yinkqubela.
32Kaloku amasalela ovela eJerusalem,
lithi nyalulu kwintaba iZiyon iqela lâbo babhungcileyo.
nguye oya kuyenza loo nto.’
33“Ewe, uNdikhoyo uthethe ngolu hlobo mayela nokumkani waseAsiriya:
“ ‘Akasoze angene kwesi sixeko,
engayi kudubula lutolo apha.
Akasoze eze phambi kwaso,
engayi kusihlanganisela ngakhaka.
Akasayi kwakha asingqinge esi sixeko.
34Ewe, wobuya agoduke kwangendlela ebeze ngayo.
Soze angene kwesi sixeko!
Nditshilo nje mna Ndikhoyo nditshilo.
35Ndiya kusihlanganisela esi sixeko;
ewe, mna ndiya kusihlangula.
Ngenxa yesidima segama lam,
nangenxa yesicaka sam uDavide,
yonke loo nto ndiya kuyenza.’ ”
36Ke kaloku isithunywa sikaNdikhoyo saya kumkhosi wama-Asiriya, safika sabulala ikhulu elinamashumi asibhozo anantlanu lamawaka amajoni. Bathe ke bakuvuka ngentsasa elandelayo bazibona izidumbu zithe gangalala! 37Ngoko ke uSenakeribhe, ukumkani waseAsiriya, wazichitha warhoxa, wabuyela eNiniva, wahlala khona.
38Ngamhla uthile ke uthe esanqula kwindlu yothixo wakhe uNiseroki, suka oonyana bakhe uAdrameleki noSharezere bamhlasela, bambulala ngekrele, baza ke babalekela kwelaseArarati. Ke uEsaradoni, omnye koonyana bakhe, wangena esikhundleni sakhe, wangukumkani.